Yakarurama sei iyo decibel mita mune watchOS 6 | Ndinobva mac
Iyo yakarurama sei iyo watchOS 6 decibel mita
Rimwe remabasa akauya kubva muruoko rwewatchOS 6 ndiyo mita yeruzha, chishandiso chinozvitarisa woga ruzha uye chinotiyambira nezvekukuvadza kwazvingaita hutano hwedu hwekunzwa zvichienderana nenguva yatinooneswa.
Iri basa, iro isingawanikwe pane mamodheru pamberi pe Series 4, inotinyevera nekubata zvishoma pachiwoko kuti ruzha rwemberi rwasvika padanho rinogona kunetsekana. Asi iyo yakajeka sei iyo decibel mita paApple Watch neWatchOS 6? Mhinduro pfupi: yakawanda.
Mushandisi weApple Watch uyo anoshanda achiita mota bvunzo, akaita bvunzo kuti aone kunyatsoita sei decibel sensor yeApple Watch iri. Izvo zvese zvakatanga riini iyo Apple Watch yakaona nharaunda ine ruzha apo injini yakanga ichimhanya. Kuti aone kuti ndezvechokwadi sei, akafananidza mhedzisiro yakatarwa neye EXTECH decibel mita.
Iyo Apple Watch yakashuma kuyerwa kwe 88dB, nepo iyo inyanzvi decibel chishandiso chinoshandiswa nemushandi uyu ichiverenga 88.9 dB. Musiyano wacho i1%. Kana isu tichifunga nezvekuti muzviitiko zvakawanda, kuverenga kwemamita nekusiyana kweanosvika 5% kunogamuchirwa, mashandiro eruzha detector yeApple Watch anoshanda chaizvo.
Kunyangwe iri basa richiverengerwa muWatchOS 6, vhezheni inoenderana kubva kuChikamu 1, iyo mita yemadhibhuru inongowanikwa muChikamu 4 uye Chinyorwa 5. Chikonzero, hatingazive, asi pamwe inoenderana nekumwe kuita kweiyo processor inobata zvese Series 4 ne5, sezvo zvakafanana. Kana pamwe, Apple yanga isingadi kuisanganisira kuti itimanikidze kumutsiridza yedu yekare Apple Watch, yaisazove nguva yekutanga uye haizove yekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo yakarurama sei iyo watchOS 6 decibel mita
Izvo zvakanaka chaizvo asi zvinondipa pfungwa yekuti inodya bhatiri. Zvichida izvozvo kana chimwe chinhu kubva kuiyo nyowani OS (ini ndichawana mumazuva mashoma nekuti ini ndaremadza mita).
Zvese zvakagadzirirwa kuvhurwa kukuru kweApple Antara kuMexico
tvOS inowedzera mifananidzo nyowani pasi pegungwa uye kubva kuISS